यी बैंकले ब्याजदर बढाए, कस्ले कति पुर्याए ? (सूचिसहित) – Clickmandu
यी बैंकले ब्याजदर बढाए, कस्ले कति पुर्याए ? (सूचिसहित)
क्लिकमान्डु २०७६ पुष २१ गते १४:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नाफा सुरक्षित गर्न बैंकहरुले ऋणको ब्याजदर बढाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ८ वटाले ब्याजदर बढाएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको नै कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने खुद ब्याज आम्दानी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदर (बेसरेट) लाई आधार बनाएर कर्जा लगानी गर्ने गर्दछन् ।
कर्जाको प्रकार अनुसार बैंकहरुले बेस रेटभन्दा केही प्रतिशत प्रिमियम थपगरि कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बेस रेटभन्दा तल रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई कर्जा दिदैनन् । कर्जाको प्रकार अनुसार फरक-फरक ब्याजदर तोकिएपनि प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरभन्दा बैंकहरुको बेसरेट परिवर्तनले कर्जाको ब्याजदरमा हेरफेर हुन्छ ।
प्रायजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्रैमासिक रुपमा बेसरेट परिवर्तन गर्दछन् । तर उच्च नाफा कमाउन केही बैंकहरु माहिनै पिच्छे बेसरेट परिवर्तन गरिरहेका छन् । बेसरेटमा माहिनै पिच्छे हेरफेर गर्न सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु नै रहेका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये १५ वटा वाणिज्य बैंकले मासिक रुपमा नै बेसरेट परिवर्तन गरिरहेका छन् । जसमा ९ वटा वाणिज्य बैंकले असोज मसान्तको भन्दा बेसरेट बढाएका छन् भने ६ वटा वाणिज्य बैंकले घटाएका छन् ।
१२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने असोज मसान्तमा परिवर्तन भएको बेसरेटलाई नै आधार बनाएर कर्जा लगानी गरिरहेको छन् ।
महिनै पिच्चे बेसरेट बढाउनेमा सिभिल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेका छन् ।
महिना नै पच्छिे उच्च बेसरेट हेरफेर गर्नेमा सिभिल बैंक रहेको छ । बैंकले असोज मसान्तमा कायम गरिएको बेसरेटमा ३.१६ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । गत असोजमा बैंकको बेसरेट ७.९४ प्रतिशत थियो ।
बैंकले उक्त बेसरेटमा मंसिर मसान्तमा ३.१६ प्रतिशत थप गरि ११.१ प्रतिशत बेसरेट कायम गरि सोहीको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । गत असार मसान्तमा बैंकको बेसरेट ११.११ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरि महिनै पिच्चे उच्च बेसरेट बढाउनेमा एभरेष्ट बैंक दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । बैंकले असोज मसान्तको ८.५२ प्रतिशत बेसरेटमा १.२५ प्रतिशत थपगरि मंसिर मसान्तमा ९.७७ कायमगरि कर्जा लगानी गरिरहेको छ ।
यस्तै कृषि विकास बैंकले ०.१९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०.१६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ०.१ प्रतिशत, नविल बैंक०.०९ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकले ०.०६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ०.०२ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ०.०१ प्रतिशत असोजको बेसरेटमा थप वृद्धि गरि कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिक मसान्तमा बैंकहरुको कर्जाको भारित औषत ब्याजदर १२.०७ प्रतिशत रहेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर १२.२६ प्रतिशत थियो । गत वर्षकोसँग तुलना गर्दा केही घटेको देखिए पनि यो वर्षका महिनाहरुमा ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।
यी बैंकले दिन्छन् सस्तो ब्याजमै ऋण, कुनको कति ?
उपाय सर्भिसेस र कामना सेवा विकास बैंकबीच सम्झौता
ज्योति विकास बैंकको नाफा २३ प्रतिशतले घट्यो
एसबीआई बैंकको सिइओमा दिपक कुमार डे नियुक्त
शाइन रेसुङ्गा बैंकले निक्षेप ६० प्रतिशत बढायो, नाफा ४७ करोड ४५ लाख
कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभु बैंकले सरकारलाई फेरि दियो १ करोड ३९ लाख